Iwe unogona sei kuchinjisa pane kugadzirisa? | Ehupfumi Zvemari
Kugadziriswa kunopihwa mu tsika zvakanyorwa pane zviyero zvinogadzira zvakateedzana zve manzwiro akasiyana kwazvo pakati pevashambadzi vese. Nekuti zvirizvo, zvinounza mufaro pakati pevaya vari kunze kwemisika yemari. Asi pane zvinopesana, ichi chikonzero chikuru chekuchenjerera kune avo vakaiswa mari panguva iyoyo. Icho chiri chikonzero ichi kuti ivo vanogamuchirwa nenzira imwechete nevamiriri vemari. Asi mune zvese zviitiko iwo unogona kuve mukana webhizinesi zvichienderana nezano rinoshandiswa nguva dzese.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti kugadzirisa kunodiwa kuti mutengo wezvikamu ukwire zvakare. Nekuti inzira inoshanda kwazvo yekuti iwe uchinje iyo mutemo wekugovera uye wekuda mune chikamu chemusika wemusika. Kupfuura dzimwe nzira dzehunyanzvi uye pamwe kunyange dzakakosha. Uye zvakare, izvi zvinowanzoitika kana kushomeka zvine mutsindo semhedzisiro yekuwedzera kwakambogadzirwa mumisika yemari. Muzviitiko zvese zvinoitika, pasina kana kusarudzika. Hazvishamise kuti kururamisa kwacho chinhu chinowanikwa mubhegi pachayo.
Kugadziriswa mumusika wemasheya, kune rumwe rutivi, hakufanirwe kutorwa sekutadza mumabasa ako. Kana zvisiri izvo zvinopesana, senge nyowani bhizimisi mukana inopihwa nemisika yemari. Iyo yakanaka nzira yekuzviongorora kubva kune yakasarudzika maonero. Kune rimwe divi, iwe unogona kugadzirisa yako nzira yekudyara panguva chaiyo iyo mavanowanikwa. Chero zvazvingaitika, mamiriro ekugadzirisa chimwe chinhu chaunofanirwa kugara nacho muhukama hwako nemisika yemari. Kwete chete mumusika wemasheya, kana zvisiri mune yakasara yemari midziyo.
1 Zvakananga mhedzisiro yekugadziriswa
2 Mhando dzakasiyana dzekugadzirisa
3 Ungatengesa sei kufamba uku?
4 Kwete yekusavhiringidzwa ne bearish zviitiko
5 Keys dzekushanda mukugadzirisa
Zvakananga mhedzisiro yekugadziriswa
Aya marudzi emafambiro mumisika yemari inoitika zvakanyanya se akamedura pamusoro zvakawandisa kubva pamasangano akapfuura ekutengesa. Kubva pane ino mamiriro, kuderedzwa kwemutengo uku kunowedzera mukati memasangano mashoma ekutengesa uye zvinoenderana nesimba ravo. Kazhinji inomira kune imwewo rutsigiro rweimwe kukosha. Kana zvirinani panguva iyo chinodikanwa muzvikamu nevashambadziri zvachinja. Saka kuti kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, iyo ascents inogona kutangwazve. Nemasimba matsva ekukwira zvinzvimbo pasina dambudziko.
Mumusika wemasheya zvinowanzo taurwa kuti kugadziriswa inzira ine hutano. Izvi zvinodaro nekuti zvinobvumidza iyo uptrend inotangazve pasina chero dambudziko. Uku ndiko kufamba kunowanzoitika mumitengo yekusimudzira yemisika yemari. Uye nekudaro, iwe haufanire kunetseka zvakanyanya pamusoro pavo. Kunze kwekunge vatyora imwe rutsigiro iyo yakakosha kwazvo pamutengo. Masheya ese anoenda nemamiriro ezvinhu aya, kwete kamwe chete asi kakawanda uye nehukuru hwakasiyana, sezvaungaona kuburikidza nemachati.
Mhando dzakasiyana dzekugadzirisa
Semamwe makirasi ekufambisa mumusika wemasheya, hapana imwe chete nzira yekuratidza hunhu uhu. Iwo anogona kuve mashoma kudzoreredza ayo anotogadziriswa mune imwecheteyo yekutengesa chikamu. Asi mune dzimwe nguva ivo vane kukosha kwakanyanya, semhedzisiro yekuziva kufamba kwakanyanya kwenguva yakareba kwazvo. Apa ndipo pazvinofanirwa kuona pamatanho api mutengo wakatemwa wapera kuitira kuyedza kuwedzera kudyara. Kunyangwe iyo dzimwe nguva inogona kuvhiringidzika pamwe neshanduko yemafambiro uye iyi ndiyo njodzi huru yekufamba kwemusika wemusika. Nekuti zvinogona kukonzera kuti iwe uite oparesheni inotyisa kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, kururamisa kunoonekwa kana mitengo ichikwanisika simuka kusvika ku15% anenge kubva pamatanho avo ekutanga. Mune akati wandei ekutengesa zvikamu uye nenzira yakareba kwenguva yakati yenguva. Iko hakuna kutsanangurwa kwenguva nekuti mune yega yega kesi zvakasiyana, asi kazhinji ivo vanowanzo gara pakati pevhiki rimwe nemwedzi miviri Nekudaro, zvakajairika kuti mumazuva mashoma kana mavhiki vanowona mitengo yavo iwe usingazvione zvakanyanya.
Ungatengesa sei kufamba uku?
Chimwe chinhu chakakosha kukosha iko kuvhiya kwauinako mune aya chaiwo mamiriro. Zvakanaka, musimboti iwe haufanire kubhadhara kutarisisa uye kuenderera nenzvimbo dzako sekunge pasina chaitika. Chero zvazvingaitika, imwe yemaitiro aunove nawo inoenderana nekugadzirisa nzvimbo kuti uzotenga zvikamu zve mutengo unodhura zvakanyanya nekuda kwezvaunoda iwe pachako. Iwe unogona kunyange kutora mukana weaya mazinga ekuwedzera ane hukasha kutsiva kupfuura pakutanga. Nenzvimbo yepamusoro yekuongorora iyo ichaita kuti iwe uwane mari yakawanda mune yega yega mashandiro.
Imwe sisitimu inogona kushanda kwazvo inogara mukati tanga mashandiro kubva pamatanho anomira kugadziriswa. Nekudaro, njodzi yekushanda uku ndeyekutarisa panguva iyo kutenga kwacho kunofanira kuitiswa. Nekuti iwe unomhanyisa njodzi yekuti iri pazasi pechiteshi. Kana kunyangwe iyo yakagadziriswa kana kumwe kutsigirwa kwehukosha hwakakosha kwatyoka uye hunyanzvi hwechengetedzo yakasarudzwa shanduko mumazuva mashoma. Kuenda kubva pakuve wakasarudzika kuenda kune yakasarudzika kana kunyatso nyudzwa mune chiteshi chehukuru hwakazotevera. Icho chinhu icho iwe chaunotyisidzira mune aya akakosha mamiriro.
Kwete yekusavhiringidzwa ne bearish zviitiko
Chero zvazvingaitika, zvinodikanwa kuti zvigadziriswe usavavhiringidze neyakajeka bearish danho. Kubva nemaonero aya, iwo mafambiro maviri akasiyana zvachose aine zvinhu zvishoma zvakafanana. Musika webere unotungamirwa nemufambiro weaya maficha nepo mukugadzirisa hazvifanirwe kupfuura nemamiriro aya. Iko kuita kwekutenga kwakanyanyisa uye kunogona kuve nekuwedzera kana kushoma kusimba. Neichi chikonzero, mune zvimwe zviitiko zvakajairika kuti ese mafambiro anogona kuvhiringidzika.
Kune rimwe divi, izvo zvinogadziriswa zvinogona kushandiswa kutenga kutenga uye purofiti mushure memasangano akati wandei ekutengesa. Paunenge uri mumamiriro emamiriro ekunze zvinopesana zvinoitika zvinoitika. Ndiri kureva, inguva yakakodzera kuti bvisa zvinzvimbo mumisika yemari. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti mutengo unogovaniswa masheya unowira zvakanyanya kubva ipapo zvichienda mberi. Sezvaungave iwe waona, izvo zvakasiyana zvinopfuura zvinoshamisa uye zvinodikanwa kuti iwe utange kuvasiyanisa kuti vagadzirise mashandiro ako pamusika wemasheya.
Keys dzekushanda mukugadzirisa
Kana kufamba kwakangoerekana kwaitika uku, uchazoda ruzivo kuti uwane zvakawanda kubva pane zvaunochengeta. Hazvishamise kuti dzimwe nguva zvinonetsa kushanda pamatanho emitengo aya. Nekudaro, kana iwe ukatevera mamwe emazano anotevera, unogona kunatsiridza yako yekutarisa account account gore rega. Kunyangwe zve izvi iwe unofanirwa kupa kuranga kwakazara mumafambiro aunogadza mumisika yemari. Iwe unoda here kuziva zvimwe zvakakosha kwazvo? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti zvinogona kubatsira zvakanyanya pane imwe nguva munguva.
Iwe unofanirwa kumirira iyo kupedzisa kugadzirisa kuitira kuti mitengo yemugove ive nemikana yakakura yekutenda. Kunyanya kana uchigadzira odha yekutenga pamusika mutengo.
Iwe unofanirwa kuziva kuti haina kutyorwa hapana chikomboredzo yakakosha kukosha. Sezvo zviito izvi zvaizoreva kudzikira kwehunyanzvi hwechengetedzo dzakasarudzwa kuita mashandiro pamusika wemasheya.
Nguva iyo inokwira kumusoro, kunyanya kutaurwa kunogadziriswa. Kuchengeta chinenge chikamu chemasvomhu. Ichi chinhu chinofanirwa kutariswa kuti chikwanise iri rino basa raunofanirwa kuita kubva zvino zvichienda mberi.
Izvo zvinogadziriswa zvinokupa iwe mutengo wezinga kuti ugone Pinda zvakare mune kukosha. Ndiwo mukana wekuti misika yezvemari inokupa iwe kuti ubatanidze munzvimbo dzavo. Kunyangwe kubva kune ine hukasha yekutenga zano.
Kazhinji mukati memasangano mashoma ekutengesa ekugadzira aya akacheka mitengo yepakutanga ichadzorerwa. Ichava nyaya yemoyo murefu kudzamara mari inowanikwa ichawisirwa mushumo yako yemari. Iko kwaunofanirwa kutsanangura kupera kweichi chiitiko.
Kugadziriswa kwakajairika mumisika yemari uye nekudaro haufanirwe kukurirwa nechitarisiko chayo. Nekuti iwe unenge watove nemikana yakakwana yekutora mukana weichi chenguva pfupi mumutengo wemutengo.
Mukudimburwa uku, mitengo haiwanzo kutungamirwa pakutanga kwekukwira asi zviri izvo zviri panjodzi. chinja kufarira pakati pevatengi nevatengesi. Zvichienderana nekusimba kwekuwedzera kwakagadzirwa kusvika kunguva idzo.
Kana iwe uchizviona iwe wakagadzirira kushanda nematanho emitengo aya, enda kumberi, nekuti iri chimiro chinobatsira kwazvo kune zvako zvaunofarira. Uye izvo hazvidi ruzivo rwakakosha sezvo kune rumwe rutivi zvinoitika neimwe nhevedzano yekuwedzera kuomarara kufamba. Kwete pasina, pane zvakawanda iwe zvaunogona kukunda uye pane zvishoma kurasikirwa. Chero bedzi iko kumusoro kukwira kuchikudzwa, zvinova izvo zvinopa kuvimbika kune zvinokwira izvo iyo yakasarudzwa yemari asset inogona kusangana. Kana iwe ukashandisa ino nzira yekudyara, iwe unenge uine zvivimbiso zvakakura zvekuti mashandiro ako pamusika wemasheya achave ari munzira chaiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iwe unogona sei kuchinjisa pane kugadzirisa?
Bitcoin chiitiko chinoshamisira chemari